Madaxweynaha Soomaliya oo ka qayb-galay Munaasabadda Bandhigga Buugaagta – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaliya oo ka qayb-galay Munaasabadda Bandhigga Buugaagta
Agoosto 27, 2015 7:56 b 0
Khamiis, Ogoosto 27, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeybgaley Bandhigga Caalamiga ee Buugaagta ee magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigey buugaag ay qoreen qoreyaal Soomaaliyeed.
Madaxweynaha oo ka qeybgaleyaasha bandhigga la sameeyay wada sheekeysi ayaa ka jawaabey su’aalo la weydiiyey oo la xiriira dhanka qorista buugaagta, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed.
“Waxaan dhiirigelinayaa in si sax ah loo qoro taariikhdaa iyo waayihii la soo marey si aan wax uga barano. Bulshadeena waxay u baahan tahay in la wacyigeliyo, dadaalkeenana aan meel isugu geyno sidii aan u yeelan lahayn dowladnimo sal adag leh, nabad waarta iyo horumar’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu Madaxweynaha sheegay in aqoon kasta oo bulsho ay leedahay aaney wax badan dalka ka beddeli karin, haddii aaney la socon midnimo iyo wadashaqeyn shacabka iyo dalka dan u ah.
DHEGEYSO:Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_28
Booliska Gaarisa oo Gacanta ku dhigay Qof Al-shabaab nimo loo haysto